PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-01-08 - Sebethembele kophase ngamalengiso
Sebethembele kophase ngamalengiso
KUKHANYA inhlansi yethemba emndenini womfundi waseAdams College oklonyeliswe njengomunye wamantombazane avelele kwiMaths nePhysical Science KwaZulu-Natal emcimbini wokumenyezelwa kwemiphumela ka-matric obuseICC, eThekwini, ngoLwesine.
UMonica Thusi (17) ongowokudabuka e-Estcourt udabule o-A abayisikhombisa kwi-Maths, Physical Science, Life Orientation, Accounting, IsiZulu ne-English.
Uthe yize enovalo ngokuyoqala impilo entsha eGoli kodwa ukulungele ukuyoqala izifundo ze-Accounting Science eWits University.
Unina uNkk Ntombeni Thusi (63), uswele amaphiko okundiza ngesikhathi umagcino wakhe ezinganeni ezine echonywa uphaphe lwegwalagwala wuNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal uMnuz Mthandeni Dlungwane.
“Ngiqale ukwazi iTheku ngesikhathi indodakazi yami ithola umfundaze wokuyofunda e-Adams College ngo-2014. Mina noyise besingeke sikwazi ukumfundisa esikoleni esiphambili kangaka ngoba siphila ngemali yempesheni. Wasizwa wothisha bakhe baseNgibongeleni abamtholela umfundaze ngoba bechazwa yindlela aphasa ngayo,” kusho uNkk Thusi.
Uthe wayengazi ukuthi ngelinye ilanga uyoke abe sendlini eyodwa nezikhulu zikahulumeni, abe yisitatanyiswa.
“Ngalo mntanami ngizibona ngimkhulu namhlanje. Ngibonga ngiyanconcoza, yeka umusa omngaka uNkulunkulu asenzele wona. Sizoqala ngaye ukuba nengane
Ieyofunda enyuvesi. Amathemba ethu sesiwabeke kuye. Ngisho eGoli lapho eyofunda khona angazi, ngizoqala ukulibona sesimphelezela.”
UMonica uthe ubonga iMoses Kotane Foundation okuyiyo eyamnikeza ithuba lwemfundo engcono.
“Ngafika eThekwini ngahlala nezingane eziqhamuka emakhaya angcono, ezigqoka kahle. Bengihlale njalo ngikhumbula inhlupheko yasekhaya okuyikho obekungigqugquzela ukuthi ngifunde,” kusho uMonica.
Khonamanjalo umfundi waseNhlakanipho High KwaMashu, uSiphesihle Mjwara (17) ongomunye wabaphase kahle iMaths nePhysical Science ubonge umholi webandla lamaNazaretha eBuhleni, uMduduzi “Nyazilwezulu” Shembe ngomkhuleko wakhe onamandla omsize wathola 0-A abayisikhombisa.
Uthe usekulungele ukuyoqala izifundo zakhe zobudokotela.